I-SQL Server kunye ne-MS yokuFikelela kuYilo kwiMarijuana kunye neeHemp Businesses
Ukuba awuyikhuphi ngokuchanekileyo iprojekthi yophuhliso, awunakufumana le nto uyifunayo.
Ukuba unekhowudi yokuthengisa ephuhliswe ngumvelisi omnye (kwaye akazange abonelele ngamaxwebhu), ukulungiswa kwikhowudi ekhoyo kunokuba nzima.
Kulula ukuyisebenzisa… ndiye ndadibana nezicelo ezininzi “ezaphukileyo” ezakhiwe ngabasebenzisi bamandla nabanye… bafikelele kwinqanaba apho izakhono zabo (okanye ixesha lokufunda) bezingonelanga kulo msebenzi,
Izisombululo zefu ziya zithandwa ngakumbi, njengoko zivumela abasebenzisi ukuba balawule idatha yabo kwi-intanethi, besebenzisa izixhobo ezininzi, ngaphandle kokubonelela ngeeseva, njl. Uninzi lwezi zisombululo zifuna ukwenziwa ngokwezifiso kunye nenkqubo ethile, nangona kunjalo.
Isisombululo seDatha yoPhuculo lweSiko
Ngelixa zombini i-Access kunye ne-Excel zinokwenziwa ngokwezifiso, amashishini amaninzi amancinci aya kukhetha ukuhamba nesisombululo sedatha esiko, ngenxa yeemfuno zabo zedatha kunye nendlela ekufuneka belawula ngayo, bahlalutye kwaye basasaze ulwazi. Izisombululo zesiko zivumela amashishini ukuba akhethe iqonga lawo (iwebhu, idesktop, iselfowuni, konke) kunye nesiseko sedatha yangasemva (Umncedisi we-SQL, MySQL, njl.
Iinkonzo - Kutheni usebenzisa i-MS Access
Ngokukhawuleza ukuphuhlisa iifom, iingxelo kunye nemibuzo.
Microsoft ifake ii-wizard ezininzi ukukhokela ukwenziwa kweefom kunye neengxelo.
Ufumana kanye le nto uyifunayo, unakho ukuqhuba isisombululo kumaqonga kunye neetekhnoloji, ngokusekwe kulwazi lwakho. Unomlingane wangaphandle (ii-DBAs kunye neeNkqubo) abasebenza kunye nawe ukuqinisekisa ukuba yonke into iyasebenza… lulwazelelo lwabo.
Ndihlala ndihlangana nabantu besebenzisa i-MS Excel yolawulo lwedatha, kwaye ngelixa inokuthi isebenzele uluhlu oluncinci, njl., Ngokubanzi ayikulungelanga ukugcina idatha.
Iinkonzo - Kutheni usebenzisa i-MS Excel
Kulula ukuseta kunye nokusetyenziswa.
Uhlalutyo lwakhiwe kwi-Excel.
Kulula ukugcina nokusasaza.
Umxhasi-Kutheni ungasebenzisi i-MS Excel
Amandla abasebenzisi abaninzi anqunyelwe (ewe, UNGANAKHO abantu abaliqela abafikelela kwifayile enye ngaxeshanye, kodwa oku ayisiyongcamango ilungileyo yokurekhoda imiba yokutshixa).
Ngaba kunokuba nzima ukuseta iifom zokungena kwedatha ngaphandle kolwazi oluhle lwe-VBA (isiSeko esiBonakalayo seZicelo). Ukugcinwa kwedatha akuhlukanga kwikhowudi kunye nohlalutyo.
Ayilungelanga ukukhonza idatha kwiiWebhusayithi (xa isetyenziswa njengedatha, hayi njengesiqhagamshelo sokukhuphela).